အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဒေါ်စုလွှတ်တော်ထဲရောက်တာ..ဘာမှ မဖြစ်လာဘူး.ဆိုပြီး. ဝေဘန်နေကြသူများ...တစ်ထွာပြရင်တစ်တောင်မြင်တတ်ပါစေ
ဒေါ်စုလွှတ်တော်ထဲရောက်တာ..ဘာမှ မဖြစ်လာဘူး.ဆိုပြီး. ဝေဘန်နေကြသူများ...တစ်ထွာပြရင်တစ်တောင်မြင်တတ်ပါစေ
အဓိကထား ဖမ်းဆီးနေပြီး ရောင်းချသူများကိုမူ
ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိဘဲ မျက်ကွယ်ပြုထားသည်ကို
ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီက
သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် အောက် လွှတ်တော်တွင် အစီရင်ခံစာ တင်ပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ ရဲများက မူးယစ်ဆေးရောင်းသူများကို
ကြီးထွားနေရသည် ဟုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသေးသည်။
(Mizzima - News in Burmese)
တရားစီရင်ရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက စွက်ဖက်၊
မြို့နယ်ထွေ/အုပ်များက လူထုရွေးထားသူများ မဟုတ်သဖြင့်
မြို့နယ်၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ရွေးကောက်ခံမဟုတ်ဘဲ
ဝန်ထမ်းနေသဖြင့် လူထုကို တာဝန်မခံ။
လွှတ်တော်ကို နေ့တစ်ပိုင်းလာက် လေ့လာမိတာနဲ့ဆဝါးမိတာလေး
ဒေါ်စုကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက အေးဆေးပါ။
ဒေါ်စုကတော့ လွှတ်တော် ကျင်းပနေစဉ် break ပေးတဲ့ အချိန်မှာ ထမင်းစားရပါတယ်။
နေ့လည် ထမင်းစား ချိန်မှာ နိုင်ငံခြား သံတမန်တွေ ဧည့်သည်တွေနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွေ ရှိသလို NLD အမတ်တွေနဲ့လည်း အစည်းအဝေးက မပြတ်ပြုလုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက် တက်တက်ကြွကြွ ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်နဲ့
ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရတော့ ဒီလို ခေါင်းဆောင်မျိုး ရှိတဲ့
မြန်မာပြည် တိုးတက်လာမှာ ဧကန်မလွဲပါဗျာ။
လွှတ်တော် ဝန်ထမ်းတွေကလည်း အန်တီ အန်တီနဲ့
အတော်လေး ဂရုစိုက်ကြတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေ ပြုလုပ်နေကြစဉ်
တစ်ခြား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အိပ်ငိုက် နေကြချိန်မှာ
ဒေါ်စုကတော့ လေ့လာစရာရှိတဲ့ စာအုပ်စာတန်းတွေကို ဖတ်မှတ်လေ့လာ နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒေါ်စုကို ဘာဖြစ်လို့ အထင်ကြီး လေးစား အားကိုး ကြတယ်ဆိုတာကို ဖြတ်ကနဲ လေ့လာလိုက်တာနဲ့ကို
သိရှိ လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
(Credit- ဒီမို ဖက်တီး ဓာတ်ပုံ- ခွန် ဒီးယမ် )
မြေလှန်ရင်းလှန်ရင်းနဲ့ အရင်က ဘိန်းဘုရင်တစ်ဖြစ်လဲ..
ဘယ် သကောင့်သားကမှ... ဘာလို့ မပြောကြတာလဲမသိပါ..
တစ်သက်လုံး.. လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကို
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:03 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook